ज्योतिषलाई देउवाको प्रश्न- अझै ४ महिना कुर्ने ? - Dainik Online Dainik Online
ज्योतिषलाई देउवाको प्रश्न- अझै ४ महिना कुर्ने ?
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार २ : ३२
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको भन्दै चर्चामा रहेका ज्योतिष हुन् सुरेशचन्द्र रिजाल ।
२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको समयमा देउवाले आफूलाई ज्योतिषले ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको सुनाएका थिए ।
तर निर्वाचनको परिणामले भने उनको दल तेस्रो स्थानमा खुम्चियो र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर सरकार पाँच वर्षकालागि समाप्त भयो ।
यसअघि ४ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवालाई ज्योतिषले ७ पटक भनेको भन्दै रिजाललाई कतिपयले ‘हावादारी’ ज्योतिष भनेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भन्दै भाषण गरेपछि देउवाले त्यसको काउन्टरमा आफूलाई ज्योतिषले ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको भन्दै जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेला उक्त विषयमा समाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठवन्धन र एकता गरेसँगै गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) झण्डै दुई तिहाइको मतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति नेकपामा भएको भएपनि पार्टीमा गम्भीर विवाद देखियो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परे भने ९ सदस्यीय सचिवालयमा पनि ओलीको पक्षमा तीन जनामात्र रहे ।
अल्पमतमा परेपछि ओलीले संसद विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरे । उनको यस्तो घोषणासँगै दुई तिहाइ नजिक रहेको नेकपामा औपचारिक विभाजन देखा प¥यो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा आन्दोलनमा उत्रिए ।
विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । रिटको संवैधानिक इजलाशमा बहस भयो र सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै पनुःस्थापना गर्दै संसद बोलाउनु पर्ने गरि फैसला ग¥यो ।
कम्तिमा पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहेका देउवा यसबिचमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने स्थानमा आइपुगेका छन् ।
नेकपा वैधानिकरुपमा फुट्न बाँकी रहेपनि स्पष्ट रुपमा दुई समूह क्रियाशिल रहेका छन् र दुबैले फरक फरक राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अबको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ र नेकपाको दुवै पक्षले एक्लै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ ।
यस्तोमा ओली तथा प्रचण्ड माधव समूह दुवैले देउवालाई विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रचण्डले त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्न सकिने सार्वजनिक रुपमा नै भनिसके ।
देउवाले पनि संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा नउत्रिएर सत्ता प्रतिको आशक्ति देखाएका छन् । उनको दल नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएसम्म ओली वा प्रचण्ड माधव पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रवल सम्भावना रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउँन देउवा ईच्छुक हुने कुरा नभएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । त्यसको अर्थ उनी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने हकमा सरकारका जाने नभए मध्यावधी चुनावपछि जित हात पारेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन् ।
यसैबीच मंगलबार(हिजो) देउवाले उनै सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग रेहेको बताउने ज्योतिष रिजालसँग भेटघाट गरेका छन् ।
वास्तुविद्समेत रहेका ज्योतिष सुरेशचन्द्र रिजालले देउवालाई उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर भेट गरेका छन् ।
ज्योतिष रिजाल भन्छन्,‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा समसामयिक विषयमा छलफल गरि उचित सल्लाह सुझाव दिने काम भयो ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको तस्वीरमा देउवा प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएका छन् ।
ज्योतिष रिजालले देउवा चैतसम्ममा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका समाचारहरु यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका कारण पनि उनी चर्चामा छन् । ज्योतिष रिजाल भन्छन्, ’ग्रहदशा बलियो छ देउवाको। हामीले ग्रह, राशी र नक्षत्रबाट क्यालकुलेसन गर्ने हो। यसले स्पष्ट देखाउँछ।’
यतिबेला देउवाको ग्रह बलियो भएर आएको उनको दावी छ । उनका अनुसार देउवाको कुम्भ राशीका हुन् । यो राशि ज्यादै बलवान भएर आएको उनले सुनाए। ओली मकर राशीका हुन् । जुन राशी अहिले कमजोर हुँदै आएको उनको दावी छ । यतिमात्र होइन, देउवालाई आरजु राणाको राशीको समेत साथ रहेको रिजालको भनाइ छ । पत्नीको ग्रहले पनि पतिलाई प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।
देउवाको प्रश्न चार महिना के गर्ने ?
प्रसाद पुर्‍याउन भन्दै रिजाल मंगलबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । कार्यकर्ताको भीडभाडबीच सभापति देउवाले कुराकानीका लागि समय निकालेको ज्योषित रिजालले बताए ।
आफू सभापति देउवाकोमा नियमित जाने गरेको भन्दै रिजालले आफू मंगलबार हात हेर्न नभइ प्रसाद पु¥याउन गएको बताए ।
प्रसाद दिएपछि देउवासँग आगामी दिनबारे केही कुराकानी भएको रिजाल बताउँछन् । त्यसक्रममा आफूले देउवालाई केही सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । रिजालका अनुसार चैतदेखि असार सम्मको समय त्यति राम्रो नभएका कारण त्यसपछि मात्र कदम चाल्न उपयुक्त हुने सुझाव देउवालाई दिएका थिए ।
‘मैले मुख्य गरी चैत ३१ देखि असारसम्मको समय अलि सावधान हुनुपर्नेछ, महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा ध्यान दिनुपर्छ भनेको हुँ,’ त्यसपछि देउवाको प्रतिक्रिया सुनाउँदै रिजालले भने, ‘औंला भाँच्दै ओहो चार महिना ! भन्नुभयो। यत्रो समय मैले के गर्ने त भन्नुभयो। उहाँ हास्नुभयो पनि !’
रिजालले तीन महिना भने देउवालाई अनिर्णित बस्न सल्लाह दिएका छन् । राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका नेकपाको दुई समूहमध्ये कुन समूहमा लाग्दा ठीक हुन्छ भन्नेबारे भने सल्लाह नदिएको रिजालको भनाई छ ।
चैत ३१ गते मंगलवार परेको र त्यही दिन नवरात्र पर्दा देवीको वाहनका रुपमा घोडामा सवार भएर प्रवेश हुने भएकाले यस्तो बेला निर्णय लिनु ठीक नभएको उनको रिजालको ज्योतिषशास्त्रीय तर्क थियो। क्षत्रभंग योगले गर्दा राजनीतिक गठबन्धन नटिक्ने रिजालको भनाइ छ ।
वैशाख १ देखि राजा र मन्त्री मंगल भएर आउने भएकाले त्यस समयको अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । एकै ग्रहले दुइटा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले एकतन्त्रीय शासन पनि आउन सक्ने भन्दै देउवालाई चनाखो हुन सुझाव दिएको बताए ।